April 2013 | IT Sharing Network
Kaspersky Daily Activation Keys 28 April 2013 + All Antivirus Daily Activation Keys Maker 2.2.2013 + Kaspersky Internet Security 2013 + 2012
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ.... Kaspar Key အသစ်လေးတွေ ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်... ကီးထည့်ပုံကိုလည်း အောက်မှာပုံနှင့်တကွ ဖော်ပြပေးထားပါတယ်... Kaspersky Internet Security 2012 (76.42MB) မရှိသေးတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် Dropbox Download ကို click ပြီးယူနိုင်ပါတယ် ... Kaspersky Internet Security 2013 v13.0.0.3370 + key + activation (142.6 Mb) အသုံးပြုလိုလျှင် ဒီလင့်မှာ တင်ပေးထားပါတယ်... Kaspersky Anti-Virus 2013 + key + activation (134 Mb) အသုံးပြုလိုလျှင် ဒီလင့်မှာ တင်ပေးထားပါတယ်... Kaspersky Key ထည့်နည်း ကို ဒီလင့်မှာ တင်ပေးထားပါတယ်... kasparsky offline update လုပ်လိုတဲ့သူငယ်ချင်းများ Update ဖိုင်များကို ဒီလင့်မှာ ဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်... kasparsky ofline update လုပ်နည်း (မြန်မာ) 1.0 MB ကို ဒီလင့်မှာ တင်ပေးထားပါတယ်... ယခု Kaspersky Keys for All Product Kaspersky ကို Sharebeast မှာတင်ပေးလိုက်ပါတယ်...
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ.... Data တွေကို Copy ကူးတဲ့နေရာမှာ မြန်ဆန်တဲ့ နာမည်ကြီး Teracopy pro 2.7 ကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်... တော်တော်များများလည်း သုံးဖူးကြမှာပါ... လိုင်စင်အတွက် Crack + Serial ပါဝင်ပြီး Crack ကို အရင်ထည့်ပြီးမှ Serial ကို ထည့်ပေးရမှာပါ... Install လုပ်ပြီး Crack, Serial ထည့်ပုံကို အသေးစိပ်ပုံနှင့်တကွ ထည့်သွင်းဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်.... အသုံးပြုလိုတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် Dropbox မှာ တင်ပေးထားပါတယ်...
Ace Translator 10.5.3.861 (languages တွေကို အပြန်အလှန်ပြောင်းလည်း ဖော်ပြပေးပြီး အသံထွက်ပါဖတ်ပေးနိုင်တဲ့)
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ.... Languages တွေကို အပြန်အလှန်ပြောင်းလည်း ဖော်ပြပေးပြီး အသံထွက်ပါဖတ်ပေးနိုင်တဲ့ Ace Translator 10.5.3.861 ကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်... အသုံးပြုနိုင်တာတွေကတော့ ( 65 languages ) ဘာသာရပ် 65 မျိုးကို အပြန်အလှန် ပြောင်းလည်းဖော်ပြပေးနိုင်ယုံသာမက (43 languages) 43 ဘာသာကို ( text-to-speech ) အသံထွက်မှန်မှန်ကန်ကန် ဖတ်ပေးနိုင်ပါတယ်... ဥပမာ Chinese ဘာသာမှ English ဘာသာကို အပြန်အလှန် ဖော်ပြပေးနိုင်သည့်အပြင် အသံထွက် ဖတ်ပေးနိုင်ပါတယ်... အဲ့လိုဖတ်ပေးနိုင်သည့်အတွက် Ace Translator မှာအသုံးပြုနိုင်သော (43 languages ) 43 ဘာသာကို မိမိသိလိုတဲ့ စကားလုံး စကားပိုဒ်တွေကို အသံထွက်သိလိုတဲ့အခါ စကားပြော လေ့ကျင့်လိုတဲ့အခါမျိုးမှာ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်.... အသုံးပြုနိုင်တဲ့ ဘာသာရပ်တွေကို အောက်မှာဖော်ပြပေးထားပြီး အသေးစိပ်လေ့လာလိုတဲ့ သူငယ်ချင်းများ Home Page ကို click ပြီး မူရင်းဆိုက်မှာ လေ့လာနိုင်ပါတယ်... အမြဲအသုံးပြုနိုင်ဖို့အတွက် patch ဖိုင်ထည့်ပေးထားပြီး patch ဖိုင်အသုံးပြုမယ်ဆိုရင် Antivirus ကို ပိတ်ထားပေးရပါမယ်... အသုံးပြုလိုတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် Sharebeast မှာတင်ပေးထားပါတယ်...
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ.... Wise Care 365 က ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း သုံးလို့ Update လေးရတိုင်းတင်ပေးဖြစ်ပါတယ်... ကွန်ပျူတာကို အသစ်နီးပါး မြန်ဆန်ကောင်းမွန်အောင် ပြုလုပ်ပေးနိုင်ပြီး လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်မယ့် အပိုင်းတွေကတော့ PC Checkup, System Cleaner, System Tuneup, Privacy Protector, Wise Utilities စသည်တို့ဖြစ်ပါတယ်.... System Cleaner မှာ Registry Cleaner, Common Cleaner, Advanced Cleaner, System Slimming တို့ပါဝင်ပြီး System Tuneup မှာတော့ System Optimizer, Disk Defrag, Registry Defrag, Start Manager စသည့်လုပ်ဆောင်ချက်တို့ ပါဝင်ပါတယ်... Pricacy Protecter မှာ Privacy Eraser, Disk Eraser, File Shredder, Password Generator စသည်တို့ပါဝင်ပြီး Wise Utilities မှာတော့ Wise JetSearch, Wise Folder Hider, Wise Data Recover, Wise Auto Shutdown, Wise Memory Optimezer စတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေပါဝင်ပါတယ်.... Pro Version အမြဲအသုံးပြုနိုင်ဖို့အတွက် keygen ထည့်ပေးထားအသေးစိပ်လေ့လာချင်ရင်တော့ www.wisecleaner.com ကို ကလစ်ပြီး မူရင်းဆိုက်မှာလေ့လာနိုင်ပါတယ်.... all-in-one PC tune-up utility software လေးပဲဖြစ်ပါတယ် ။ သူငယ်ချင်းအားလုံးလဲ အသုံးပြုဘူးတဲ့ဆော့ဝဲလ်ကောင်းတစ်ခုပါ။ အရင်တုန်းကလည်း တင်ပေးဘူးပါတယ်။ အရင်လို serial မဟုတ်တော့ပါဘူး keygen လေးထည့်ပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။
Internet Download Manager 6.15 Build9Final + Retail | 5.07 MB
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ... Internet Download Manager 6.15 Build9Final ကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်... အရင်တင်ထားတဲ့ IDM ကို Uninstall လုပ်ဖို့မလိုပါဘူး..... လုပ်မယ်ဆိုရင်လည်း Uninstall လုပ်တဲ့အခါမှာ default နေရာမှာ complete ကိုရွေးပေးရပါမယ်.... အောက်မှာလည်အဆင်ပြေအောင် ပုံနဲ့တကွရှင်းပြထားပါတယ်... ဒီအတိုင်းတင်မယ်ဆိုရင် idman615.exe ကို Run လိုက်ပါ... ထုံးစံအတိုင်း Next ...... Next .... Finsh ပေါ့ဗျာ... အဲ့အတိုင်းပြီးသွားပြီဆိုရင် IDM ကိုမဖွင့်သေးပဲ patch ဖိုင်ကို ထုံးစံအတိုင်း patch ခြိုးပေးလိုက်ပါတယ်... Internet Download Manager ကို patch ဖိုင်ဖြင့် full version ဖြစ်အာင်ပြုလုပ်အသုံးပြုပုံကို ဒီလင့် မှာ တင်ပေးထားပါတယ်.... Resume download လုပ်ထားတာတွေလည်း မပျက်ပါဘူး 6.15 Build9လည်းဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်...မိမိအသုံးပြုနေတဲ့ Internet Download Manager ကို Download speed အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် မြှင့်တင်ပေးနိုင်တဲ့ IDM OPTIMIZER (297.85KB) မရှိသေးတဲ့ သူငယ်ချင်းများ အသုံးလိုမယ်ဆိုရင် ဒီမှာ ယူနိုင်ပါတယ် .... လက်ရှိသုံးနေတဲ့ Internet Download Manager ကို update လုပ်ပြီး မိမိကိုယ်တိုင် crack လုပ်သုံးလို့ရတဲ့ IDM cracker tool (438.20KB) ကို အသုံးပြုလိုလျှင် ဒီမှာ ယူနိုင်ပါတယ် .... Registry ထဲကနေ Internet Download Manager ကို download speed မြှင့်တဲ့နည်းကို ဒီမှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ် .... IDM မှာမပါတဲ့ apk ကဲ့သို့သော အခြား Files Types တွေကိုဒေါင်းစေချင်ရင် ဒီမှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ်... အသုံးပြုလိုတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် Dropbox ကနေတင်ပေးထားပါတယ်....
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ.... System Repair Disc ရေးသားနည်းကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်... အတော်အသုံးဝင်တဲ့ နည်းလေးပါ မိမိစက်ရဲ့ ၀ယ်ခါစ အခြေအနေမှာဖြစ်စေ၊ လက်ရှိအသုံးပြုနေတဲ့ အခြေအနေမှာဖြစ်စေ System Repair Disc တစ်ချပ်ရေးသားထားပြီး Windows ရဲ့ error တွေကို ပြုပြင်နိုင်ခြင်း System Restore ပြုလုပ်နိုင်ခြင်း၊ Memory error ကိုရှင်းနိုင်ခြင်းတွေကို လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်... Windows ပြန်မတက်နိုင်တော့တဲ့ အခြေအနေမျိုးမှာ အလွန်အသုံးဝင်ပါတယ်.. ပြုလုပ်နိုင်တာတွေကတော့ 01. Start Up Rapair >>> Automaticallly fix problems that are preventing windows from starting 02.System Restore >>> Restore windows to an earlier point in time 03.System Image Recovery >>> Recover your computer usingasystem image you created earlier 04.Windows Menory Diagnostic >>> check your computer for memory hardware errors 05.Command Prompt >>> Openacommand orompt window စသည့်အပိုင်းတွေကို ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်....
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ..... ကွန်ပြူတာ ကျန်းမာရေးအတွက် ဆောင်ထားသင့်တဲ့ Advanced SystemCare Pro 6.2.0.254 Final ကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်.... System Utility ထဲမှာ ကမ္ဘာ့ top စာရင်းဝင်ဖြစ်ပါတယ် ... Iobite ကထုပ်တာဖြစ်ပြီး Free download အဖြစ် Uninstaller, game booster, Smart Defrag, freeware တို့ကို တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်ပါသေးတယ် ...internet booster နဲ့ registry cleaner/defrag တို့က pro အဆင့်အထိပါဝင်ပါတယ်... internet speed နဲ့ download speed ကိုလည်း အကောင်းဆုံး အခြေအနေတရပ်အထိ တိုးမြှင့်ပေးနိုင်ပါတယ် ... လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်တာတွေကတော့ Malware removal, Regisity Fix, regisity Defrag, System Optimization, Startup Optimization, Shortcut Fix, Privacy Sweep, Junk files clean, Security Defense, Disk Scan, Vulnerability Fix, Disk Defragment စတာတွေကို တစ်ချက်နှိပ်ယုံနဲ့ scan and repair တစ်ခါတည်းလုပ်နိုင်ပါတယ် ... Toolbox မှာလည်း Clean, Optimize, repair, Security and Control ဆိုပြီးအသီးသီးပြည့်စုံအောင်ထည့်ပေးထားပါတယ်... Turbo Boost ကိုလည်း on/off လုပ်ပြီး လိုသလိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ် ... ကွန်ပြူတာမြန်ဆန်ကောင်းမွန်စေဖို့ တကယ်သုံးသင့်တဲ့ဆော့ဝဲလ်လေးပါ ... အသုံးပြုလိုတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် Dropbox, လေးနေရာမှာတင်ပေးထားပါတယ် ယူသွားလိုက်ပါခင်ဗျာ.....
Android OS ကို မိမိတို့ရဲ့ Window OS ပေါ်မှာ တင်ပြီး စမ်းကြည့်လို့ရတဲ့ဆော့ဝဲလ်လေးပါ အရင်တုန်းကလည်းတင်ပေးဘူးပါတယ်။ ခုကောင်လေးကတော့ ဗားရှင်းအသစ်ကလေးပါ။ android apk လေးတွေ ဒေါင်းပြီး တာနဲ့ ကွန်ပျူတာပေါ်မှာတင်စမ်းပေါ့ ကောင်းတယ် ကြိုက်တယ် အသုံးဝင်တယ် ဆိုမှ မိမိ android ဖုန်းလေးကို ထည့်လို့ရတာပေါ့ဗျာ။
ဒီဂိမ်းလေးကတော့ သူငယ်ချင်းအားလုံးဖုန်းထဲမှာ ဆော့ဖူးပြီးသားဂိမ်းလေးပါပဲ အသစ်ကလေးတွေ့လို့ ပြန်လည်မျှဝေပေးတာပါ။ သူငယ်ချင်းအားလုံးကြိုက်ကြမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
မိမိဖုန်းရဲ့ Android Version က 2.1 အထက်တော့ လိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
မင်္ဂလာပါ ဒီဆော့ဝဲလ်လေးကတော့နဲနဲကြာနေပါပြီ ကျွန်တော်ခုမှ တွေ့လို့ မျှဝေပေးတာပါ။ ဆော့လေးကလည်းတော်တော်လေး လန်းပါတယ်။ မိမိ ကြိုက်တဲ့ဆော့ဝဲလ်လေးတွေ Launcher ပေါ်တင်ထားပြီး အသုံးပြုလို့လည်းရပါတယ် အသွင်အပြင်လေးကလေး မိုက်ပါတယ်။ အသုံးပြုလိုတဲ့သူငယ်ချင်းများအတွက် ပြန်လည်မျှဝေပေးတာဖြစ်ပါတယ်ချင်ဗျာ။
ဒီဆော့ဝဲလ်လေးကတော့ မိမိဖုန်းထဲကို ကွန်ပျူတာကနေ မြန်မာဖောင့်နဲ့ Keyboard သွင်းပေးနိုင်တဲ့ exe ဖိုင်လေးပါ။ အလွယ်ကူဆုံးနဲ့အမြန်ဆုံး install လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
မင်္ဂလာပါ ခင်ဗျာ ဒီဆော့ဝဲလ်လေးကတော့ မိမိတို့ စက်ရဲ့ MAC Address ကိုရှာပေးမဲ့ ဆော့ဝဲလ်လေးပါ။ နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ သင့်တော်ရာ mac ကိုလည်းပြောင်းလည်းပေးနိုင်ပါတယ်။ wifi network မှာ mac filter လုပ်ထားတယ်ဆိုရင် ခွင့်ပြုထားတဲ့ mac ကိုလည်း change ပေးနိုင်ပါတယ်။ စမ်းသပ်အသုံးပြုကြည့်ဖို့ ပြန်လည်ဝေမျှပေးတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
ပြည့်ပြည့်စုံစုံလေ့လာဖို့အတွက်လည်း မူရင်းဆိုက်လေးကို အောက်မှာ ထည့်ပေးထားပါတယ်။
အရင်တုန်းကတော့တင်ပေးဘူးပါတယ် internet အသုံးပြုတဲ့အခါ အလွန်မြန်ဆန်တဲ့ browser ဆော့ဝဲလ်လေးပါ။ ခုတင်ပေးထားတာကတော့ maxthon ရဲ့ cloud brower လေးဖြစ်လို့ အသစ်အဆန်းလေး အသုံးပြုလိုတဲ့သူငယ်ချင်းများအတွက် ပြန်လည်မျှဝေပေးတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ဒီဆော့ဝဲလ်လေးကတော့ window 8 လို google chrome လို browser ပေါ်မှာ မိမိသုံးချင်တဲ့ app တင်ထားပြီးတော့ အသုံးပြုလို့ရတဲ့အပြင် အသွင်အပြင်လေးကလဲ ဘေးတိုက်ကလေးမို့ အမြင်ဆန်းပါတယ်။အသုံးပြုရတာလည်းတော်တော်လေးမြန်ဆန်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ခုဗားရှင်းလေးကတော့ အသစ်ကလေးပါ ဆိုက်ထဲက အကိုတစ်ယောက်က ဒါလေးပဲ အမြဲသုံးပါတယ် အသစ်ထွက်တိုင်း တင်ပေးပါဆိုလို့ ပြန်လည်မျှဝေပေးတာပါခင်ဗျာ။အခြားသူငယ်ချင်းများလည်း အသုံးပြုကြည့်ပါ သူဘာကြောင့် ဒီလောက်ကြိုက်နေလဲ သိရတာပေါ့ခင်ဗျာ။
မင်္ဂလာပါ ခင်ဗျာ အရင်တုန်းကလည်းတင်ပေးဘူးတဲ့ဆော့ဝဲလ်လေးပါ ခုဗားရှင်းလေးက portable လေးလဲဖြစ် ဖိုင်ဆိုက်ကလေး သေးသေးလေးမို့ပြန်လည်ဝေမျှပေးတာပါ။ မိမိစက်ရဲ့ Registry ကို အကောင်းဆုံး ရှင်းလင်းပေးမဲ့ဆော့ဝဲလ်လေးပါ။ အသုံးမလိုပဲပိုနေတဲ့ Regeistry ကို ရှင်းလင်းပေးမယ်၊ Registry အမှားတွေ ကို ပြုပြင်ပြီး ပြန်လည် restore လုပ်ပေးမယ်၊ Registry ကို အစီတကျရှိအောင် Defragment ပြုလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ကွန်ပျူတာပေါ်မှာ မရှိမဖြစ်သုံးထားသင့်တဲ့ဆော့ဝဲလ်လေးပါ။
Chin Tablet နဲ့ Phone တော်တော်များများကို Root လုပ်ပေးနိုင်မဲ့ Tool လေးပါ
ခုဖော်ပြပေးတဲ့ Root Tool လေးကတော့ အရင်တုန်းကလည်းတင်ပေးဘူးပါတယ်ခင်ဗျာ ခုဗားရှင်းအသစ်ကလေးတွေ့လို့ ထပ်ပြီးတင်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ သူငယ်ချင်းအားလုံး အထဲမှာပါတဲ့ Function တွေအားလုံးကို အသုံးပြုဖို့ အတွက် google မှာ ပုံရှာရင်းနဲ့ english လို ဘာသာပြန်ပေးထားတာတွေ့လို့ ပြန်လည်ဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ် ။ ဘာသာပြန်ပေးထားတဲ့ အကို ကိုလည်း အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ အစတုန်းက တရုတ်လိုကြီး ပဲ ဆိုတော့ တရုတ်လို နားမလည်တဲ့သူတွေ အဆင်မပြေကြဘူးလေ ခုတော့ သူငယ်ချင်းအားလုံးအဆင်ပြေသွားတာပေါ့ခင်ဗျာ ။ အားလုံးပဲ အဆင်ပြေမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
Download ပြီးသွားရင်တော့ Desktop ပေါ်မှာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ... Gmail ဆိုတာ အင်တာနက်အသုံးပြုသူတိုင်း မကင်းနိုင်တဲ့ အရာပါ များများလေ့လာနိုင်လေ များများသိလေ ကောင်းလေပါပဲ.... ယခု Gmail အတွက် အစွမ်းထက် နည်းလမ်း (၈၀) ဆိုတဲ့ စာအုပ်ကလေးကို လေ့လာနိုင်အောင် မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်... စာမျက်နှာ ၃၀ ပါဝင်ပြီး စာမြည်းဖတ်နိုင်ရန် ရှေ့စာမျက်နှာ ၅ မျက်နှာကို ဖော်ပြပေးထားပါတယ်... လေ့လာလိုတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် Sharebeast, Dropbox, Minus အဆင်ပြေတဲ့ နေရာက ဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်....
Typing Tutor ဗားရှင်းအသစ်ကလေးမို့ ပြန်လည်ပြီး တင်ပေးလိုက်တာပါ ။ တင်တော့တင်ပေးဘူးပါတယ် ကြာတော့ကြာပါပြီခင်ဗျာ။ ခုဗားရှင်းလေးကို ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးနဲ့ စာရိုက်ကျင့်မဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက်ပါ။ အသွင်အပြင်လေးကလဲ မော်ဒန် ဒီဇိုင်းလေးပါ။ မိမိ အိမ်မှာ ညီငယ်ညီမငယ်တွေ အတွက်ဆောင်ထားသင့်တဲ့ ဆော့ဝဲလ်လေးမို့ ပြန်လည်ဝေမျှပေးတာပါ။ မူရင်းလင့်ကလေ့လာလို့ရအောင်လည်းတင်ပေးထားပါတယ်။
မြန်မာ့ ဗေဒင်ကို ၀ါသနာပါတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက်ပြန်လည်မျှဝေပေးတာပါ။ ဒီဆော့ဝဲလ်လေးက ဇာတာဖွဲ့ ဆော့ဝဲလ်လေးပါ အသုံးပြုလိုတဲ့သူငယ်ချင်းများ စမ်းသပ်အသုံးပြုလို့ရအောင်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ကျွန်တော်တော့ နားမလည်ပါဘူး စမ်းသပ်အသုံးပြုကြည့်ကြပါခင်ဗျာ။
Super Video လေးကတော့ Video Player လေးပါ သူရဲ့ထူးခြားချက်ကတော့ ခုနောက်ပိုင်း Samsung Phone 4.1.2 တွေ ပါဝင်တဲ့ Features တွေလေအသုံးပြုလို့ရပါတယ် Video ကို ကြည့်နေရင်းက message ရိုက်တာတို့ online သုံးနေတာတို့ ပြုလုပ်လို့ရပါတယ် ။ နေရာလေးတွေလည်းရွေ့ပြီး ကြည့်ရှု့လို့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ format တော်တော်များများကိုလည်း အထောက်အကူပေးပါတယ်။
ဒီဆော့ဝဲလ်လေးကတော့ နံပါတ်တွေကို နှိပ်စရာမလိုပဲ လက်နဲ့ရေးပေးပြီး တွက်ချက်လို့ရတဲ့ Calculator လေးပါ သူငယ်ချင်းတွေ အသုံးပြုလို့ရအောင် ပြန်လည်မျှဝေပေးတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
ခုဖော်ပြပေးမဲ့ဆော့ဝဲလ်လေးကတော့ hacker တွေရန်ကနေကာကွယ်ပေးမဲ့ ဆော့ဝဲလ်လေးပါ။ security level ကိုမြင့်ထားပြီး အသုံးပြုလို့ရပါတယ် မိမိ စက်ကို မိမိမသိတဲ့အချိန်မှာလည်း keylogger လိုဆော့ဝဲလ်မျိုးလေး သွင်းသွားပြီး hack လုပ်မဲ့ရန်ကလည်းကာကွယ်ပေးနိုင်သလို usb stick တွေ ကို သုံးပြီး data တွေကူးယူခြင်းကိုလည်းကာကွယ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဆော့ဝဲလ်လေး run ထား ဒါကိုကြည့်ပြီး disable protection လုပ်ဖို့ ကြိုးစားမှုကိုလည်း ကာကွယ်ဖို့ Password လေးပေးထားပြီး Protect လုပ်ထားနိုင်ပါတယ်။
Window7မှာ သုံးသလို start button လေး ကို window 8 မှာ ထည့်သွင်းအသုံးပြုလိုတဲ့သူငယ်ချင်းများအတွက်ပါ။ အရင်တုန်းကတော့ တင်ပေးဘူးပါတယ် ခုဗားရှင်းလေးက နောက်ဆုံးဗားရှင်းလေး ဖြစ်တာမို့ ပြန်လည်မျှဝေပေးတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ ။ ပြည့်ပြည့်စုံစုံလေး လေ့လာလို့ရအောင် မူရင်းစာသားတွေ ကို အောက်မှာ လေ့လာကြည့်ကြပါခင်ဗျာ။
Peachtree Accounting (ကွန်ပျူတာ စာရင်းကိုင် မြန်မာလို စာအုပ်)
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ... ကွန်ပျူတာ စာရင်းကိုင် လေ့လာလိုသူများအတွက် ဝေဖြိုးအောင် (NATOGYI) ရေးသားထားတဲ့ Peachtree Accounting မြန်မာလို စာအုပ်ကလေးကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်... ကွန်ပျူတာ စာရင်းကိုင် အတွက် အသေးစိပ်ရေးသား ပြုစုထားပြီး ပါဝင်တဲ့ အခန်းတွေကို သိရှိနိုင်ရန် ရှေ့စာမျက်နှာ (၅) မျက်နှာကို အောက်မှာ ဖော်ပြပေးထားပါတယ်... လေ့လာ ဆောင်ထားသင့်တဲ့ စာအုပ်ကောင်းလေးဖြစ်လို့ ဒေါင်းယူထားကြပါလို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်...
ဒီနည်းလမ်းလေးကတော့ သူငယ်ချင်းတွေက window7မှာ window xp လို movie maker မပါဘူးလားလို့ Install လုပ်ရင်ရလားလို့ လာလာမေးလို့ ပြန်လည်ဝေမျှပေးတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ movie maker တင်မဟုတ်ပါဘူး window live mail, photo gallery, Window DvD maker, Microsoft Sky drive, Window live messager တို့အားလုံးကို install ပြုလုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ Security Software အနေနဲ့ကတော့ Microsoft Security Essentials 2012 ကိုပါ install ပြုလုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ.... ပီစီအဆင့်မြှင့်တပ်ဆင်ခြင်း - မောင်ကွန်ပျူတာ ရေးသားထားတဲ့ ဖတ်ထားသင့် ဆောင်ထားသင့်တဲ့ စာအုပ်ကောင်းလေး တစ်အုပ်ဖြစ်ပါတယ်... မိမိကွန်ပျူတာကို အဆင့်ထပ်မြှင့်ဖို့အတွက် ဆိုပေမယ့် system အစိတ်အပိုင်းတွေက အစပြည့်စုံအောင်ရှင်းပြထားပါတယ်... ပါဝင်တဲ့ မာတိကာတွေကို အောက်မှာ ဆက်လက် ဖတ်ရှုနိုင်ရန်နှင့် စာမြည်းသိနိုင်ရန် ရှေ့စာမျက်နှာ (၅) မျက်နှာကို ဖော်ပြပေးထားပါတယ်....
Browser တွေသုံးရတာ ငြီးငွေ့နေတဲ့သူငယ်ချင်းများအတွက် အသစ်ထွက်ရှိလာတဲ့ browser အသစ်လေးကို ပြန်လည်ဝေမျှပေးတာပါ။ နာမည်နဲ့လိုက်အောင် မြန်ဆန်ပါတယ်။ မသုံးချင်လည်းဆောင်ထားလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ ဖိုင်ဆိုက်ကလဲသေးသေးလေးပါ။အောက်ကလင့်လေးကနေတစ်ခါဒေါင်းယူသွားနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
မင်္ဂလာပါဗျာ... အားလုံးသိပြီးသားဖြစ်တဲ့ GOM Player 2.1.50 Build 5145 Final ကို Sharebeast မှာ တင်ပေးထားပြီး မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်... အသုံးပြုလိုတဲ့ သူငယ်ချင်းများ ယူသွားနိုင်ပါတယ်...
GOM Player – A very powerful multimedia player. It includes numerous features that ensureahigh level of play. With GOM Player you can play even damaged or not completely downloaded / copied AVI files. GOM Player supports all modern video and audio formats such as video mobile phones and digital cameras as well as playback of online content directly from the network.
မြန်မာ-အင်္ဂလိပ် အဘိဓါန် + Whizzo (Eng to Mya Dictionary) +Eng - Myan / Mya - Eng Dictionary Portable + Ayar Myan to Eng
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ... မြန်မာ-အင်္ဂလိပ်အဘိဓါန် + Whizzo (Engnish to Myanmar Dictionary) + Ayar Myanmar to English + English - Myanmar / Myanmar - English Dictionary Portable လေးမျိုးကို တောင်းထားတဲ့ ဆရာတော်နဲ့ မရှိသေးတဲ့ အခြားသူငယ်ချင်းများပါ ဆောင်ထားနိုင်အောင် ပြန်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်... မရှိတာလေးတင်ရွေးပြီး Download ယူနိုင်အောင် တစ်မျိုးစီကို လင့်ခွဲ တင်ပေးထားပါတယ်...
အရင်အပတ်က ကျွန်တော့သူငယ်ချင်းက firefox ပေါ်မှာ Facebook ကို ကာလာ လေးတွေ ပြောင်းသုံးတဲ့နည်းလေးတင်ပေးထားပါတယ်။ ခုဖော်ပြပေးမဲ့ဆော့ဝဲလ်လေးကတော့ Android Device ပေါ်ကနေ Facebook အသုံးပြုတဲ့သူငယ်ချင်းများ အပြာရောင်ကြီး သုံးနေရာတာ ငြီးငွေ့နေမှာဆိုးလို့ တွေ့တာလေး ပြန်လည်ဝေမျှပေးတာပါ။
ခုဖော်ပြပေးမဲ့ဆော့ဝဲလ်လေးကတော့ google translate လိုမျိုးဆော့ဝဲလ်လေးပါ။ ဒီဆော့ဝဲလ်လေးကတော့ ဘာသာစကားတွေကို ပါးစပ်ကတော့ ပြောလိုက်ရုံပါပဲ မိမိသိချင်တဲ့ ဘာသာစကားကိုပြောင်းထားပေးပြီးပြောရင်တော့ အဲဒီဘာသာစကားအတိုင်းအသံလေးထွက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ် ။ Galaxy S4 မှာပါဝင်တဲ့ S Translate လောက်တော့ ကောင်းချင်မှ ကောင်းမှာပါ။ အသုံးပြုလိုကောင်းမဲ့ဆော့ဝဲလ်လေးမို့ ဆောင်ထားလို့ရအောင် ပြန်လည်မျှဝေပေးတာဖြစ်ပါတယ်။
Superuser Update ပြုလုပ်လို့ error တတ်နေတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် ဒီဆော့ဝဲလ်လေးက အထောက်အကူပြုပေးမှာပါ။ လိုရမယ်ရ ဆောင်ထားလိုက်ပါ။ ကျွန်တော်တော့ စမ်းမသုံးကြည့်ရသေးပါဘူး ဟိုရှာဒီရှာနဲ့တွေ့လို့ ပြန်လည်ဝေမျှပေးတာပါ။ အောက်ကလင့်လေးကပဲတစ်ခါ
ဒီဆော့ဝဲလ်လေးကတော့ မိမိအသံလေးကို မူလအသံမှ Voice effect လေးတွေ သုံးပြီးပြောင်းလည်းပေးနိုင်တဲ့ဆော့ဝဲလ်လေးပါ။ မိမိအသုံးလေးကို အသံဖမ်းထားပြီး ကြိုက်နှစ်သက်ရာ effect လေးတွေ သုံးပြီး ပြောင်းလည်းပေးနိုင်ပါတယ် အသုံးပြုလိုတဲ့သူငယ်ချင်းများအတွက် ပြန်လည်ဝေမျှပေးတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ Playstore မှာတော့ အလကားပေးထားတာထည့်မပြောတော့ဘူးနော်
မိမိဖုန်းပေါ်မှာ အသုံးပြုနေတဲ့ facebook password လေးမေ့သွားတဲ့အခါ ပြန်လည်ဆယ်ယူလို့ရတဲ့ဆော့ဝဲလ်လေးပါ။ သူငယ်ချင်းများအသုံးပြုလို့ရအောင် ပြန်လည်ဝေမျှပေးတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။